Accueil Ny Mpitandrina Toriteny Toriteny 04/11/2018
NY DIDY LEHIBE INDRINDRA (Mar 12 :28-34)
Araka ny lovantsofin’ireo raby, ny lalàn’i Mosesy dia mirakitra didin’Andriamanitra miisa 613 ka ny 365 dia didy mandrara na ny tsy azo atao, ary ny 248 kosa milaza ny tsy maintsy atao. Ny iray amin’ireo fitsipiky ny fanazavan-kevitra dia nanana fironana hametraka ny didy rehetra ho mitovy : « Fa ny didy heverina maivana dia ho lehibe ihany koa ho anao »
Afaka niainga tamin’ny fikasana tsara izany, ary maneho ny fitiavan’Andriamanitra mahatoky; saingy mety hivadika ho fandalàn-dalàna sarototsarotiny (légalisme pointilleux), ary indraindray dia tonga hatrany amin’ny fanovàna ny fomba fisainana mihitsy. Noho izany, misy amin’ireo raby nametraka amin’ ny toerana mitovy ny fandrarana ny fisamborana vorona sy ny fampianarana ny amin’ny fankatoavana ny ray sy reny.
Tamin’ny andron’i Jesoa, nisy tamin’ireo nanampahaizana tamin’ny finoany niezaka nametraka ambaratonga tamin’ireo izay tsy maintsy atao ao amin’ny lalàna ; izay no anton’ny fanontanian’ity manam-pahaizana ity an’i Jesoa : « Inona no didy lehibe indrindra ? »
Tam-boalohany i Jesoa dia namaly tamin’ny fanambarana ny Det 6,5, teny tsara izay hain’ny olona rehetra, satria, efa hatrany amin’ny andron’i Jesoa, ny Jiosy rehetra dia tokony mamerimberina izany teny izany farafaratsiny indroa isan-andro. Izany ihany koa no vakitentsika voalohany androany : « Henoy ry Israely, ny Tompo Andriamanitsika dia Iray. Tiava ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, ary ny herinao rehetra ».
Tsy tokony ho terena eto, ny fanavahana ny amin’ny fo, fanahy sy ny saina. Ho antsika, tandrefana moderna, ny fo dia ilaina indrindra amin’ny fitiavana ; ho an’ny hebreo, ny fo dia manana ny anjarany ihany koa amin’ny fampiasana ny saina : Andriamanitra dia manome fo mba hahatakarana (Det 29,3). Ho an’ny Jiosy tamin’ny fotoanan’i Jesoa, ny fo dia sady fieritreretana no fitadidiana, sady tsindrimandry no hery ara-moraly. Ao amin’ny fo no ipoiran’ny fitiavana, fa ao amin’ny fo ihany koa no hiovan’ny fomba fijery sy ny hevitra ho fanam-pahan-kevitra sy teti-kasa. Ary indrindra, ao amin’ny fo no miori-paka ny toe-pinoana sy ny tsy fivadihana amin’Andriamanitra. Ny fo, ara-baiboly, noho izany dia ny maha izy azy ny olona ary toerana manan-danja hivelaran’ny finoana.
Noho izany : « Tiava ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo » dia mitovy amin’ny hoe : « Ny aminao manontolo dia hietsika ho amin’ny fitiavana ny Tomponao ; ianao dia hanantona an’Andriamanitra miaraka amin’izay tsara indrindra amin’ny maha ianao anao »
Fa i Jesoa dia nanampy avy hatrany, eo ampitanisana amin’ity ny Levitikosy(19,18) : « Tiava ny namanao tahaka ny tenanao ». Izay no didy faharoa, tsy afa-misaraka amin’ilay voalohany saingy miavaka mandrakariva. Satria ny fitiavana ny hafa dia tsy afaka manolo ny fitiavana an’Andriamanitra, ary koa ny namana dia tsy manolo an’Andriamanitra.
Fa ireo didy roa ireo dia mitovy, satria ny fitiavana ny namana, toy ny fitiavana an’Andriamanitra, dia tokony manetsika ny maha olona sy ny heriny rehetra. Tsy afaka ny hanantona marina an’Andriamanitra isika, raha tsy manomboka mitia izay tian’Andriamanitra ; ary arakaraky ny anakaikezantsika an’Andriamanitra, no anakaikezantsika ireo zanak’Andriamanitra. « Ny fiantràna, dia manerana ny tany hoy i Thérèse de Lisieux, ary masina isika arakaraky ampiarantsika azy »
« Ary hoy ilay mpanora-dalàna taminy : marina izany tompoko, tsara ny nilazanao fa iray ihany Andriamanitra, ary tsy misy hafa-tsy Izy : ary ny ho tia Azy amin’ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ho tia ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra ho dorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. » Ary raha hitan’i Jesoa fa namaly tam-pahendrena izy, dia hoy izy taminy : « tsy lavitra ny fanjakan’Andriamanitra ianao ».
« Tsy lavitra ianao » : izany dia sady mampahery no manakivy. Izany dia midika hoe : « Efa an-dalàna ianao ; fa mbola tsy tonga ». « Tsy lavitra ianao » : amintsika tsirairay no itenenan’i Jesoa satria vory isika mba hiaino ny Teniny.
Tsy lavitra ianao satria mitady ny marina, satria te ahita izany eo anilako.
Tsy lavitra ianao, satria te hanisy dikany ny fiainanao, ny asanao, ny fijalianao, ny fanoloran-tenanao ; satria ianao dia te aka bahana manoloana ny fisafotofotoan’ny fiainanao ; satria te hiala amin’ny fahazarana, amin’ny laingan’ny fifandraisana ety ivelany, amin’izay maneritery ny fiainana, toy ny didy 613 amin’ny lalàna izay nataonao.
Tsy lavitra ianao, raha hitanao ny maha-zava-dehibe ny fiantràna, raha tsapanao fa tokony haniry ho an’ny rahalahinao izay tianao ho anao ianao : fiainana feno fifaliana, fahalalana, fahombiazana, ny fankasitrahan’ny hafa, ary ny fisakaizan’Andriamanitra .
LE PLUS GRAND COMMANDEMENT (Mc 12 :28-34)
Selon la tradition des rabbins, la Loi de Moïse comprenait 613 commandements de Dieu : 365 défenses et 248 obligations. L’une des règles d’interprétation avait tendance à situer tous les commandements sur le même plan : « Que le commandement léger te soit aussi cher que le commandement grave ! »
« Tu n’es pas loin : c’est à la fois encourageant et décevant. Cela veut dire : « Tu y viens ; mais tu n’y es pas encore ». « Tu n’es pas loin » : c’est à chacun de nous que Jésus s’adresse, puisque nous sommes réunis pour entendre sa parole ».